Google Ends Programma Drone, sa ny tsaho - ITS Tech Tech
Google Ends Programma Drone, Izany ve ny tsaho?
Ny dikan'ny Titan, izay miankina amin'ny drafitra fiaramanidina tarihina, dia manitatra i Loon dia mifototra amin'ny rafi-pandrefesana marobe izay manidina eny amin'ny tontolon'ny tontolon'ny tany.
Ny fandefasana entana dia mampita ireo fitaovana fitantanana ny alam-barotra amin'ny alàlan'ny masoandro izay ahazoan'ny LTE famantarana avy amin'ny rafitra tena izy manerana izao tontolo izao, izay atolotra ho an'ny fandefasana entona isan-karazany, ka hametraka rafitra maimaim-poana amin'ny toerana misy amin'izao tontolo izao tsy misy aterineto.
Manitatra an'i Loon ny famolavolana azy nanomboka ny 2013 ary dia afaka mandefa fomba hafa mivezivezy ao amin'ny rafitra ao anatin'ny fotoana fohy.
Ny sidina lava lava lava indrindra tamin'ny olona iray nohafohezina dia andro 190, izay nanamafy mihoatra ny 75,000 kilometatra fiaramanidina sy namakivaky firenena XnUMX nitokana, araka ny tenin 'X.
4 Fampianarana Mandritra sy Fanamafisana ny Microsoft
Ity trangam-panafintohinana Gmail vaovao ity dia mamitaka ny mpanjifany efa fantatry ny rehetra: Indro ny tsiambaratelo ny manaiky izany